ကိုဗစ် မကူးစေဖို့ သဘာဝက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး - Zet Star
ကိုဗစ် မကူးစေဖို့ သဘာဝက ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး
နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ဟာ တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူနေကြပါတယ်။ သူတို့ ၅ ယောက်လုံးက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တွေ့ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅ ယောက်မှာ ၂ ယောက်က ရောဂါကူးစက်မခံရပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၃ယောက်ကတော့ ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွားတယ်။ လူ၅ယောက် ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တွေ့ကြုံရတာချင်းအတူတူ ၃ယောက်က ရောဂါရပြီး ၂ယောက်က ဘာလို့လွတ်သွားရတာလဲ….? အဖြေကတော့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားချင်း မတူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါမရတဲ့သူတွေက ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းကြပြီး ရောဂါရသွားကြသူတွေကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကိုယ်ထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံးထွက်လာတာကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားထဲက Anti body တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို Anti body တွေက သွားရောက် ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက် လူကို ရောဂါမကူးစက်နိုင်တော့ဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအနည်းနဲ့ အများရှိကြပေမဲ့ အချို့လူတွေမှာ အနည်းငယ်လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်တွေဝင်လာတာ များရင် မခုခံနိုင်တော့ဘဲ ကျရှုံးသွားရတဲ့အတွက် ရောဂါကူးစက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆိုတာက အမေမွေးကတည်းက လူတိုင်းမှာပါလာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိုယ်ခံစွမ်းအားချင်း မတူကြဘူး။ ကိုယ်ခံအားနည်းကြရတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ..? အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ မိခင်နို့မစို့ခဲ့ရတဲ့သူတွေ ၊အသည်းမှာ BပိုးCပို့း H ပိုးရှိတဲ့သူတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါ ရှိကြတဲ့သူတွေ၊ free radical များတဲ့သူတွေ၊ အာဟာရချို့တဲ့သူတွေ၊ ဆေးလိပ်အရက်စွဲနေကြသူတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလူတွေဟာ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုသေနေကြတဲ့သူတွေမှာ အဲ့လို ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းသူတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်က ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် Boost လုပ်ထာကြဖို့ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင် လုပ်ချင်ကြတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ဂ ဃနဏမသိကြဘူး။ ကြားဖူးနားဝလေးတွေပဲ လိုက်လုပ်နေကြရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အတိအကျပြောပြပါမယ်။ အခုကာလအတွက် သာမက တစ်သက်လုံးရောဂါကင်းပြီး သက်တမ်းစေ့အောင် နေနိုင်ဖို့လည်း အသုံးကျတဲ့အတွက် မြန်မာများ အားလုံး သေသေချာချာ မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကိုယ်တွင်းကနေ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ထွက်လာတဲ့ အရင်းအမြစ် ၃ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- (၁) သွေးရည်ကြည် (၂)​သွေး (၃) အူပိုး
အဲဒီ၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ သွေးရည်ကြည်အကြောင်း စပြောမယ်။ ကျနော်တို့ ခေါင်းအစခြေအဆုံး လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေတဲ့ အကြည်ရောင် အရည်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကို `လင်ဖက်တစ်´ လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ သွေးရည်ကြည်ပေါ့။ အဲဒီလင်ဖက်တစ်သွေးရည်ကြည်ထဲမှာ ပြင်ပရောဂါပိုးတွေ ဝင်လာရင် ချက်ချင်းတိုက်ထုတ်ပေးမယ့် Anti body တွေ ထြီလျံချီပြီး ရှိပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာရှင်တွေကတော့ T cell, B cell စသည်ဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီသွေးရည်ကြည် အားကောင်းမှကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုက သွေး။ သွေးထဲမှာ သွေးနီဥတွေနဲ့ အတူရောပြီး ရှိနေတာက သွေးဖြူဥတွေဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာရှင်တွေ ကတော့ WBC လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ သွေးဖြူဥတွေကလည်း ကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးမှန်သမျှကို ဖျက်ဆီးဝါးမျိုပေးပါတယ်။
တတိယတစ်ခုကတော့ အူတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ အကျိုးပြုပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအူပိုးတွေကလည်း ကိုယ်တွင်းကို ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ကိုက်ဖျက် ဝါးမျိုပစ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲဒီ ၃ မျိုး အားကောင်းနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားက မြင့်နေပြီး မည်သည့်ရောဂါပိုးမှ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ၃မျိုးလုံး အားကောင်းအောင် လုပ်ရမယ်ပေါ့။ ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးရည်ကြည် အားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သွေးရည်ကြည်ဖြစ်ပေါ်လာစေတာက ကျနော်တို့ စားလိုက်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကရတဲ့ Enzyme တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေ မျိုးစုံပါတဲ့ အသီးအရွက်တွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အရည်ရွှမ်းသစ်သီးတွေထဲက Antioxidant ဓာတ်ဟာ အင်မတန်အခရာကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သစ်သီးဝလံတွေ များများစားခြင်း ကြိတ်သောက်ခြင်းတွေက သွေးရည်ကြည်ကို အားကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးထဲက သွေးဖြူ ဥအားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆက်ပြောမယ်။ သွေးဖြူ ဥဟာ ပရိုတင်း တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သူ့ကို အမိုင်နိုအက်စစ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ အမိုင်နိုအက်စစ်တွေ အဓိကရတဲ့ source ကတော့ အနီရောင် အသားနဲ့ အသည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆိတ်သားနဲ့ ဆိတ်ကလီစာတွေမှာ အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသည်းမှာ ဗီတာမင်တွေ သတ္တုဓာတ်တွေ တော်တော်စုံအောင် ပါပါတယ်။ အကယ်၍ သက်သတ်လွတ်စားတယ် ဆိုရင်ပဲပုပ်ပဲကို စားခြင်းဖြင့် အမိုင်နိုအက်စစ်ပရိုတင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အူတွင်းအကျိုးပြု ပိုးမွေးဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ probiotic ပိုးတွေအများကြီးပါတဲ့ အိမ်လုပ်ချဉ်ဖတ်မျိုးစုံ ၊ကင်မ်ချီ၊ ရှမ်းမုံညင်းချဉ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ပုစွန်ချဉ်၊ ငါးဖယ်ချဉ်၊ငါးလေးချဉ်၊ ဝက်သားချဉ်၊ကီဖာတွေကို နေ့စဉ်သင့်ရုံစားသောက်ရုံနဲ့ကို ဘီလျံချီတဲ့ အကျိုးပြုပိုးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးတွေနေတဲ့ အူလမ်းကြောင်း ခိုင်ခံ့ဖို့ အရိုးပြုတ်ရည်သောက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ အူတွေသန့်ဖို့အတွက် ဝမ်းမှန်အောင်သွားပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အဲဒီ ၃ မျိုး အပြင် ဘာလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့ ဟိုမုန်းပါ။ တိရစ္ဆာန်အဆီကိုစားပြီး နေပူဆာလှုံပေးရင် ဗီတာမင် D ဓာတ်ထွက်လာပါတယ်။ ဗီတာမင် D ဟာ ကိုယ်တွင်းမှာ ဟိုမုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ် ။အဲဒါတွေအားလုံးအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက် အိပ်ရေးဝဖို့ရယ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းကို ချွေးပုပ်တွေ ထွက်သွားတဲ့အထိလုပ် နေ့စဉ်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေက လတ်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကာလနာရောဂါ တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ တစ်သက်လုံး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းပြီး ကျန်းမာအသက်ရှည်ဖို့၊ အသက်ကြီးသည် အထိ ဖလန်းဖလန်းထနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာမှတ်ထားပြီး ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ကုသိုလ်ဖြစ် မျှဝေပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများ အားလုံးမိမိရဲ့ Body ကို immunity ကောင်းပြီး၊ မည်သည့် ပြင်ပရောဂါပိုးလာလာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ၊ခံတပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ထားကြပါလို့…….
← ကိုဗစ် အိန္ဒိယထိုးဆေးရဲ့ လူတွေ သိပ်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းတရားနဲ့ ဆေးတန်ဖိုးအမှန်အကန်
အမြန်စစ် Test kit ကြောင့် ဒုက္ခရောက်သွားရတဲ့ လူငယ်တဦး (အကြီးကြီး လွဲသွားခဲ့ပါတယ်) →